अब सांसद निष्कासन गर्ने ओलीको पालो ! कसको-कसको जान सक्छ सांसद पद ?
काठमाडौं – तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादबाट बिग्रिएको राजनीति अहिले एकअर्काका सांसदलाई कारबाही गर्ने दिशातिर उन्मुख छ । माओवादी केन्द्रले मंगलबार साधारण सदस्य पनि नरहने गरी चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै त्यस्तो प्रक्रिया अन्य दलमा पनि देखिन थाल्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
एमालेमा पनि विवाद बढ्दै गएसँगै अध्यक्ष केपी ओली पनि सांसदलाई निष्कासन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेका छन्।
सांसदको हकमा भने केही निर्णय गरिएको छैन । नेपाल समूहमा ३७ सांसद कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन्छन्। ओलीनिकट स्रोतले भने उनीहरूलाई आफूतिर ल्याउने प्रयास जारी राख्ने जनाएको छ। तर नआए कारबाही अघि बढाउने तयारी पनि भएको बताइएको छ। ओलीले पार्टीका सदस्यलाई कारबाही गर्न थाल्ने हो भने त्यसले संसदीय राजनीतिमा झन् विकराल अवस्था आउने देखिन्छ।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २६, २०७७०९:२१
कमिसन काण्डमा फसेका बाँस्कोटालाई यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी !